ကမ္ဘာမြေမှ Albedo ။ ၎င်းသည်အဘယ်နည်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင်အပူချိန်ထိန်းညှိမှုကိုသြဇာညောင်းစေသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာမြေ၏ albedo။ ၎င်းကို albedo အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်လူသိများပြီး၎င်းသည်အပူချိန်ကိုအလွန်သြဇာညောင်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု။ albedo ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနိဂုံးချုပ်ရန်နှင့် albedo ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်အတွက်အစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက် albedo ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်ကောင်းကောင်းသိထားရမည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု.
ဒီဆောင်းပါးမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ albedo ဆိုတာဘာလဲ၊ ကမ္ဘာ့အပူချိန်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲ၊ ပြောင်းလဲစေပုံကိုရှင်းပြပါမယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။
1 ကမ္ဘာမြေ၏ albedo ကဘာလဲ?
2 Albedo နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
ကမ္ဘာမြေ၏ albedo ကဘာလဲ?
ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအပူချိန်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်လွှမ်းမိုးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ Albedo သည်နေ၏ရောင်ခြည်များသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ကျရောက်သောအခါ၎င်းရောင်ခြည်များကိုအာကာသသို့ပြန်သွားသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သိထားတဲ့အတိုင်း, အားလုံးမဟုတ်ဘူး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည် အဲဒါကငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုသက်ရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာကိုစုပ်ယူတယ်။ ဤနေရောင်ခြည်ဖြာထွက်ရောင်ခြည်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်မိုclouds်းတိမ်များရှိနေခြင်းအားဖြင့်လေထုထဲသို့ပြန်လည်သက်ရောက်သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ ကြွင်းသောအရာတို့သည်မျက်နှာပေါ်သို့ရောက်ကြ၏။
ကောင်းပြီ၊ နေ၏ရောင်ခြည်များကျရောက်သောမျက်နှာပြင်အရောင်ပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုသောပမာဏကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောပမာဏကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။ မှောင်မိုက်သောအရောင်များအတွက် နေရောင်ခြည်၏စုပ်ယူမှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အနက်ရောင်သည်အပူအများစုကိုစုပ်ယူနိုင်သောအရောင်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရောင်များသည်ဆိုလာဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပစ်မှတ်သည်အမြင့်ဆုံးစုပ်ယူမှုနှုန်းရှိသောပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျေးရွာများတွင်အိမ်ဖြူတော်များကိုသာတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူစုပ်ယူမှုနည်းသောကြောင့်မြင့်မားသောနွေရာသီအပူချိန်မှအိမ်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်အားလုံးနှင့်၎င်းတို့၏စုပ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှုန်းသည်ကမ္ဘာ၏ albedo ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောအရောင် (သို့) ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်ပေါ် မူတည်၍ နေသို့မဟုတ်ပိုမိုများပြားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။ ဤအချက်သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည် ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါး၌တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်။
ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်သေချာစဉ်းစားမိသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ albedo သည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များအားလုံးနှင့်လေထုအတွင်းရှိအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးများလာခြင်းအပြင်အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးသည်။ ကမ္ဘာ၏ဝင်ရိုးစွန်းများသည်အလွန်ထူးခြားသော albedo အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ကြောင့်ဝင်ရိုးစွန်းထုပ်၏ရှေ့မှောက်တွင်မှလုံးဝအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ ဆိုလိုသည်မှာဝင်ရိုးစွန်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ကျသောနေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်အများစုကိုပြန်ထင်ဟပ်ပြီးအပူအဖြစ်သိုမဟုတ်သိုလှောင်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူပင်လယ်များ၊ သမုဒ္ဒရာများနှင့်သစ်တောများစသည့်မဲမှောင်သောမျက်နှာပြင်များဖြင့်စုပ်ယူမှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အကြောင်းကတော့ပင်လယ်ရေသည် treetops များကဲ့သို့အရောင်မှောင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏနည်းပါးသောကြောင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ albedo နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုမှာ polar ice caps များမကြာမီအရည်ပျော်လာခြင်းနှင့်အတူအာကာသသို့ပြန်သွားသည့်နေရောင်ခြည်ပမာဏလျော့ကျလာခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်ပျော်နေသောအပိုင်းသည်၎င်း၏အရောင်များကိုအလင်းမှမှောင်မိုက်ရောင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်အပူပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးကမ္ဘာ့အပူချိန်မှာလည်းပိုမိုမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမြီးကိုကိုက်သောအဖြူနှင့်တူ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လေထုထဲတွင်အပူကိုထိန်းထားသည့်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များတိုးများလာခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန်တိုးလာသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုလာပိုထုပ်များအရည်ပျော်နေခြင်းကြောင့်နေသည်လည်းရောင်ခြည်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်အအေးပေးသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ impinged ။
လူသားများသည်အစွန်းရောက်ခြင်းများကိုအမြဲတစေရှောင်ကြဉ်သည်နှင့်အမျှသစ်တောများတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရောင်ခြည်ပိုမိုများပြားလာသည်ကိုသူတို့ကြားသည်နှင့်လက်ကိုခေါင်းပေါ်သို့တင်ကြသည်။ ဤအရာသည်၎င်းနှင့်သာမက၎င်းတို့မသိသောအရာအားလုံးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်သည်။ အရာရာတိုင်းဟာအစွန်းရောက်တစ်ခုမဟုတ်၊ ကြည့်ကြရအောင်၊ သစ်တောသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်အပူချိန်တိုးလာသည်။ ထို့အပြင် ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲပြင်များအရည်ပျော်လာသည့်အခါ၎င်းကိုပင်လယ်မျက်နှာပြင်ဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်ဒီမှောင်ဖြစ်ခြင်း, ထို့ကြောင့်၎င်း၏စုပ်ယူမှုတိုးမြှင့်။
ကောင်းပါပြီ၊ ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်သစ်တောများမှာသန်းပေါင်းများစွာသောအပင်မျိုးစိတ်များပါ ၀ င်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိရသင့်ပါတယ် photosynthesis နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုကိုသန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့လေထုထဲသို့စွန့်ပစ်လိုက်သောဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ လူတို့သည်သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းကိုမကုသနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာနားမလည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာကောက်ယူခြင်းအားဖြင့်ဤသစ်တောများကိုနတ်ဆိုးများအဆုံးသတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင်ထပ်လောင်းအတည်ပြုသောလေ့လာမှုများစွာရှိသည် မိုးရွာသွန်းမှု၏ရှေ့တော်၌ကြီးမားသောသစ်တောထု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ သစ်တောထုများများလေလေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုးခေါင်မှု၏အခြေခံဖြစ်သောမိုးရေချိန်ပမာဏများလေလေဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြောခြင်းသည်မိုက်မဲသော်လည်းအကာအကွယ်အားလုံးသည်အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းသစ်ပင်များကကျွန်ုပ်တို့အားရှူရှိုက်မိသောအောက်စီဂျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မပါဘဲမနေထိုင်နိုင်ခြင်းကိုလည်းပေးသည်။
သစ်ပင်များကိုနတ်ဆိုးစွဲရန်သို့မဟုတ်အရာရာကိုအစွန်းရောက်ရန်မလိုပါ။ အရေးကြီးသောအရာသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ လေထုထဲတွင်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည် နှင့်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်စားသုံးမှုအလေ့အထများပြုပြင်မွမ်းမံ။ ၎င်းသည်လေထုထဲတွင်အပူထိန်းထားသောဓာတ်ငွေ့များလျော့နည်းစေသဖြင့်ကမ္ဘာမြေ၏တိုင်များအရည်ပျော်မည်မဟုတ်ပါ။ တိုင်များအရည်ပျော်မသွားပါကအပူကိုစုပ်ယူသောမျက်နှာပြင်သည်မတိုးနိုင်သကဲ့သို့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်လည်းမြင့်တက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်မှုမရှိတော့ဘဲလူများအနေဖြင့်သစ်တောများကိုဤကဲ့သို ဆက်၍ ဆက်လက်သောင်းကျန်းနေဆဲဖြစ်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ကမ္ဘာမြေ၏ Albedo
Luis ac ဟုသူကပြောသည်
နောက်ထပ်အလွန်ကောင်းသောသတင်းဆောင်းပါးသည်ဤလိုအပ်သောသဘောတရားများကိုများစွာသင်ပေးသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် GERMAN P.
luis ac အားပြန်ကြားပါ